कसलाई अख्तियारको आयुक्त बनाउने ? : RajdhaniDaily.com -
Home बिचार कसलाई अख्तियारको आयुक्त बनाउने ?
संवैधानिक परिषद्ले लामो समयदेखि विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसक्दा ती निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । सत्तारूढ दल नेकपामा लामो समयदेखिको शक्ति र सत्ताको झगडाले सिंगो सरकारको कामकारबाहीसमेत प्रभावकारी हुन नसकिरहेको अवस्थामा त्यसको असर संवैधानिक निकायहरूमा समेत परेको छ । नेकपामा देखिएको विवाद तत्कालका लागि समाधान भए पनि सरकारले आफ्नो कामलाई चलायमान बनाउन सकेको छैन । पटकपटक बस्ने गरेको सचिवालय बैठकले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने र त्यसका लागि दलले पूर्ण सहयोग गर्ने निर्णय गर्दै आइरहेको छ । त्यस्तै, स्थायी कमिटीको बैठकले समेत सरकारको कामकारबाहीलाई सशक्त बनाउनुपर्नेलगायतका विषयमा विभिन्न निर्णय गरी म्यान्डेट दिए पनि सरकार आक्रामक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । सचिवालय बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा छिटोभन्दा छिटो पदपूर्ति गर्न सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ । तर पनि सरकारले पदपूर्ति प्रक्रिया अगाड बढाउन नसक्नु दुःखद भएको छ ।
Not-to-be-missed एजेन्सी - March 4, 2021 0
श्यामप्रसाद मैनाली - May 11, 2020 0
राजधानी समाचारदाता - October 5, 2020 0
भर्खरै महेश्वर गौतम - March 11, 2020 0
प्रदेश २ रासस - March 5, 2020 0
प्रदेश ४ रासस - January 17, 2021 0